Ntughari uche na ozioma nke ubochi: Jenụwarị 19, 2021 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ntughari uche na Oziọma nke ụbọchị: Jenụwarị 19, 2021
Ka Jizọs na-agagharị n’ubi ọka wit n’ thebọchị Izu Ike, ndị na-eso ụzọ ya malitere ịga ebe ha na-atụtụ ntị. Ndị Farisii wee sị ya: "Lee, gịnị mere ha ji eme ihe iwu na-akwadoghị n'thebọchị Izu Ike?" Mak 2: 23–24
Ndị Farisii na-echegbu onwe ha banyere ọtụtụ ihe bụ mmejọ nke iwu Chineke Iwu nke atọ kpọrọ anyị "Dobe ụbọchị izu ike." Ọzọkwa, anyị gụrụ n’Ọpụpụ 20: 8–10 na anyị agaghị arụ ọrụ ọ bụla n’ụbọchị izu ike, kama anyị ga-eji ụbọchị ahụ zuru ike. Site n’iwu a, ndị Farisii mepụtara ọtụtụ ihe banyere ihe a nabatara na ihe a machibidoro ime n’ thebọchị Izu Ike. Ha kpebiri na iwe ọka ntị bụ otu n'ime ihe ndị a machibidoro iwu.
N’ọtụtụ mba taa, ezumike nke ụbọchị izu ike agwụla kpamkpam. O di nwute, Sunday adighi adi karie maka ubochi nke ofufe na izu ike na ezinulo na ndi enyi. N'ihi nke a, o siri ike ijikọ na nke a hypercritical ikpe nke ndị na-eso ụzọ site ndị Farisii. Ajuju ime mmụọ miri emi yiri ka ọ bụ ụzọ hyper "fussy" nke ndị Farisii nakweere. Ha anaghị echegbu onwe ha banyere ịsọpụrụ Chineke n’ụbọchị izu ike ka ha nwere mmasị n’ikpe na ikpe ikpe. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ ihe dị ụkọ taa ịchọta ndị na-akpachapụghị anya na-echegbu onwe ha banyere ụbọchị izu ike, ọ na-adịkarị mfe ịchọta onwe anyị ka anyị na-echegbu onwe anyị banyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ná ndụ.
Tụlee ezinụlọ gị na ndị kacha gị nso. There nwere ihe ha mere na omume ha mebere nke na-akatọkarị gị? N’oge dị iche iche, anyị na-akatọ ndị ọzọ maka ikwubiga okwu ókè n’akụkụ nke anyị. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji obi ebere na-ekwu okwu megide imebi iwu nke mpụga nke Chineke, anyị kwesịrị ịkpachara anya ịghara idobe onwe anyị dị ka onye ọka ikpe na ndị ọka iwu nke ndị ọzọ, ọkachasị mgbe nkatọ anyị gbadoro ụkwụ na ịgbagọ eziokwu ma ọ bụ ikwubiga okwu ókè banyere ihe pere mpe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ịdị na-eme mkpesa n'onwe anyị.
Tughari uche taa na udiri obula gi n’aru nmekorita gi na ndi gi na ha kacha gi nso bu ndi gabigara oke ma gha gbagharia n’ozi gi. You na-ahụ onwe gị ka ị na-echu m ụra maka obere mmejọ ndị ọzọ na-eme kwa ụbọchị? Gbalịa ịhapụ ịkatọ taa ma megharịa omume ebere gị n'ebe onye ọ bụla nọ. Ọ bụrụ na i mee otú ahụ, ị ​​ga-achọpụta n’ezie na mkpebi ndị ị na-eme banyere ndị ọzọ adịghị egosi n’ụzọ zuru ezu ịbụ eziokwu nke iwu Chineke.
Onye ikpe nke obi ebere m, nye m obi obi ebere na ebere n’ebe mmadu nile no. Wepu ikpe na nkatọ niile n’obi m. Ana m ahapụrụ gị ikpe niile, ezigbo Onyenwe anyị, naanị ihe m na-achọ bụ ịbụ ngwa ọrụ nke ịhụnanya Gị na ebere Gị. Jesus ekwere m na gị.